Qaadayso Magnet - Shiinaha Ningbo Sine
Mabaadi'da Model PML Joogtada Magnet u qaada ayaa jidka magnetic xoog saaray qalabka magnetic NdFeB. On iyo Off jidka magnetic waxaa ay gacanta ku soo jeestay xamili Buugga PML lifters magnetic joogto ah leeyihiin magnet sida xoogga, iyo awoodda qaadista ay marnaba wiiqi doonto.
In loading iyo dejinta, qaada ee maalmo kartaa bir / blocks steel, dhululubada iyo kuwa kale oo u gal qalabka magnetic waayo, ku xirid ah ee la xidhiidha. Waa arrin aad u sahlan tahay codsiga in loading, dejinta, iyo inay dhaqaaqaan. PML lifters magnetic joogto ah waa xarunta qaadista ugu fiican ee warshadaha, guraan, bakhaaro, iyo gaadiid.
Khafiif ah oo ingeniously habaysan, fududahay codsiga, awood jiidashada magnetic xoog iyo ammaan u maaraysay.
Open iyo Download buugga soo saarka ah u qaada magnetic
Magnet u qaada